Semtka Waxay bixisaa 3 Hagaajinta Shabakadaha Waddanka ee ugu muhiimsan Waa inaad ogaataa
Webka xoqitaanka, oo loo yaqaano goosashada webka iyo soo saaridda xogta, waa habka loo soo saaro macluumaadka shabakadda. Nidaamka shabakadda barnaamijka wuxuu internetka ka helayaa Qodobka Xawilaadda Qodobka Sharciga, ama iyada oo la adeegsanayo daalacayaasha internetka ee kala duwan. Macluumaad gaar ah ayaa la uruuriyaa oo la koobiyeeyaa - design a cool logo for free. Waxaa markaa lagu kaydiyaa xog ururin dhexe ah ama lagu soo daabacay qalabkaaga adag. Habka ugu fudud ee lagu heli karo xogta ka timid goobta waa in ay si toos ah u soo dejiso, laakiin sidoo kale waxaad isticmaali kartaa barnaamijka shabakada shabakada si aad u hesho shaqadaada. Haddii content uu ku faafo kumanaan goobood ama bogagga shabakadda, waa inaad isticmaashaa soo dejinta. io iyo Kimono Labs si loo helo loona habeeyo xogta sida shuruudahaaga. Haddii socodka shaqadaadu yahay mid tayo leh oo aad u adag, markaa waxaad codsan kartaa mid ka mid ah hababahan mashaariicdaada.
Hordhac # 1: DIY:
Waxaa jira tiro badan oo ah tiknoolajiyada shabakadaha furfuran ee shabakadda. Habka DIY, waxaad kiraysan doontaa koox ka kooban horumariyeyaasha iyo barnaamijyadeeda si aad u hesho shaqadaada. Ma aha oo kaliya xogta xoqidda adiga oo ku hadlaya magacaaga laakiin sidoo kale waxay qaadi doonaan faylasha. Habkani wuxuu ku habboon yahay shirkadaha iyo ganacsiyada caanka ah. Habka DIY ma ahan mid ku habboon shaqaalaha xorta ah iyo bilawga ah sababtoo ah kharashka badan. Haddii la isticmaalo farsamooyinka shabakada qashinka ee loo isticmaalo, barnaamijyadaaaga ama soo-saareyaasha ayaa laga yaabaa inay kuugu kacaan qiimaha caadiga ah. Si kastaba ha ahaatee, habka DIY wuxuu xaqiijiyaa bixinta xogta tayada.
Hordhac # 2: Qalabka adeegga iyo adeegga shabakadda:
Inta badan, dadku waxay adeegsadaan adeega adeegga shabakadaha iyo qalabka si ay u helaan shaqadooda. Maqalka, Kimono, Soo-dejinta. io, iyo qalabka kale ee la midka ah ayaa lagu fuliyaa yar yar iyo weynba. Ganacsatada iyo websaydhayaashu waxay xitaa ka qaadaan xogta website-yada gacanta, laakiin tani waxay suurtagal tahay haddii ay leeyihiin barnaamijyo waaweyn iyo xirfado cod-bixineed. Web Scraper, oo ah fure Chrome, ayaa si ballaaran loo isticmaalaa si loo dhiso boggaga internetka oo lagu qeexo waxyaabaha kala duwan ee goobta. Mid ka mid ah, xogta waxaa lagu soo rogay faylasha JSON ama CSV. Waxaad dhisi kartaa shabakada adeegga shabakada ama adeegso qalab hore u jiray. U hubso in barnaamijka aad isticmaashid uusan ku koobnayn oo kaliya goobtaada laakiin sidoo kale wuxuu ku dhajin doonaa bogagga shabakadaada. Shirkadaha sida Amazon AWS iyo Google waxay bixiyaan qalab yareynta , adeegyada, iyo macluumaadka dadweynaha oo bilaash ah.
Hordhac # 3: Macluumaadka-u-adeegga (DaaS):
Marka la eego xogta xoqista , macluumaadka-as-a-adeeg waa farsamo u oggolaanaya macaamiisha inay abuuraan xogta qaaska ah. Ururada intooda badani waxay ku kaydiyaan xogta la xoqay ee ku yaal bakhaarka isku-dhafan. Faa'iidada habkan ee ganacsatada iyo falanqeeyayaasha xogta waxay tahay in ay soo bandhigto farsamooyin cusub oo ballaadhan oo shabakadeed; Waxa kale oo ay ka caawisaa abuurista raadad dheeraad ah. Waxay awoodi doonaan inay doortaan waraaqo lagu kalsoonaan karo, raadso sheekooyinka raadinta, oo ay ku muujiyaan xogta si ay u qaybiyaan iyada oo aan wax dhibaato ah.
Barnaamijka Kaydinta Shabakada La Wareego
1. Uipath - Waa qalab fiican oo kombuyuutarro ah waxaana laga dhaafi karaa caqabadaha faafaahinta xogta webka ee caadiga ah, sida bogga bogga, qashin gelinta fiilada, iyo jarista faylasha PDF.
2. Soo dejinta. Io - Qalabkan waxaa ugu fiican ee loo yaqaan interface interface-saaxiibtinimo wuxuuna xareeyaa xogtaada waqtiga dhabta ah. Waxaad ka heli kartaa wax-soo-saarka ee foomamka CSV iyo Excel.
3. Kimono Labs - API ayaa loo abuuray bogagga shabakadda ee rabitaankaaga, macluumaadkana waa la xiri karaa warfaafinta iyo suuqyada saamiyada.